Snn Nepal बूढानीलकण्ठमा गठबन्धनका लागि खोजियो ग्यारेन्टी, माधव नेपालमाथि शंकाको नजर ! – Snn Nepal
बूढानीलकण्ठमा गठबन्धनका लागि खोजियो ग्यारेन्टी, माधव नेपालमाथि शंकाको नजर !
काठमाडौ । प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काँग्रेस नयाँ गठबन्धन निर्माणका साथै त्यसलाई सफल बनाउन तीव्र कसरतमा रहेको छ । सोहीअनुसार काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देवासहितका नेताहरु माओवादी केन्द्र,नेकपा एमालेको झलनाथ खनाल-माधव नेपाल पक्ष र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का नेताहरुसँग घनिभूत छलफलमा छन् ।